September 11, 2008, 2:52 am Filed under: Articles, Lin Let Kyal Sin စက်တင်ဘာ ၃ရက်နေ့နှင့် ၄ရက်နေ့ The Arts House မှာ ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ How To Write & Sell A Novel Seminar နှင့် Developing Stories And Characters For Novels, Movies And Games Seminar ကို ကျွန်မ စိတ်ဝင်စားမှုများဖြင့် တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မတို့ အာရှတိုက်ကလူများဟာ အင်္ဂလိပ်စာပေကို ကျွမ်းကျင်သူထက် မကျွမ်းကျင်သူက ပိုများနေပါတယ်။ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်လို ရေးသားဖို့ဆို ပိုခက်ခဲပါတယ်။ ဒီအချက်အလက်တစ်ခုကပဲ ကျွန်မတို့ အာရှတိုက်ကလူတွေအတွက် တွန့်ဆုတ်စရာ ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ အနုပညာဆိုတာ စိတ်ကူးစိတ်သန်းနဲ့ ဖန်တီးဖို့ပါပဲ။ ဘာသာစကားတွေ ၊ ယဉ်ကျေးမှုတွေ တူစရာ မလိုပါဘူး။ မိမိခံစားရသော ၊ ဖွဲ့တည်လိုသော အကြောင်းအရာကိုပဲ မိမိပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဘာသာနဲ့ လက်ရာမြောက်အောင် ဖန်တီးဖို့ပဲ လိုအပ်ပါတယ်။ အာရှတိုက်မှာ အရည်အချင်းရှိသူတွေ ၊ ကမ္ဘာကမသိတဲ့ အကြောင်းအရာ အဖြစ်အပျက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ကုန်ကြမ်းတွေပြွတ်သိပ်နေတဲ့ ဒီအာရှတိုက်က အနုပညာဗီဇပါသူတွေဟာ ဘာသာစကားအခက်ခဲကို မေ့ထားပြီး မိမိကျွမ်းကျင်မှုဘာသာရပ်နဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကို အကောင်ထည်ဖော်ဖို့ Mr Vittachi က သေသေချာချာ ရှင်းလင်းအားပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ – ထုတ်ဝေသူ
September 11, 2008 @ 4:07 am Reply	ငါ့ညီမတော့ အလွန်တရာ အကျိုးရှိတဲ့ ဆီမီနာကို သွားတက်ခဲ့တာပဲကိုး။ စာရေးဆရာကောင်းဖြစ်ဖို့ အခြေခံလိုအပ်ချက်များ ဆိုတာတွေဟာ မှတ်သားစရာတော်တော်ကောင်းပါတယ်။ အတွေ့အကြုံတွေကို ပြန်လည်ဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူးပါညီမရေ။
September 11, 2008 @ 4:31 am Reply	စာရေးခြင်း အနုပညာကို လာဖတ်သွားပါတယ်။
September 11, 2008 @ 12:42 pm Reply	စာလာဖတ်သွားပါတယ် ညီမရေ..စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီး အင်မတန် အကျိုးရှိတဲ့ seminar ပါပဲ။ ဖတ်ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်။
September 12, 2008 @ 4:32 am Reply	Sis Lin Let…This isavery good post which relates your experience atavaluable seminar. There is always something new and precious to achieve in this kind of seminar and one ought to attend if the oppotunity smiles…!
September 12, 2008 @ 10:31 am Reply	ကျေးဇူးပဲ မလင်းလက်ရေ။ စီဘောက်ပါတ်စ်ဝဒ်က မေ့သွားလို့ ဒါနဲ့ ကော်မန့်ခ်ဝင်ရေးခဲ့တယ်။ ဒီပို့လေးက ကောင်းတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော့်လို မဖြစ်ညစ်ကျယ် စာပေ၀ါသနာပါသူတစ်ဦးအတွက်။ ဒီလိုပွဲမျိုးတက်ခွင့်ရတဲ့ မလင်းလက်လည်း တော်တော်ကံကောင်းတာပဲဗျာ။ကျေးဇူး
Comment by နေသစ်
September 15, 2008 @ 9:34 am Reply	မမ အားကျလိုက်တာဗျာ..ညီမ စာအရမ်းရေးတတ်ချင်တာဘဲ..ညီမအတွေးအခေါ်တော့ကောင်းတယ် သူများနဲ့ မတူတာတွေကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့နေရာမှာ ၀ါသနာလဲအရမ်းပါတယ်.ဒါပေမဲ့ စာဖတ်အား အရမ်းနဲနေတဲ့အတွက် အရေးအသားက ထင်သလောက်မကောင်းဘူး..မမ ပို့စ်လေးက တန်ဖိုးရှိတယ်..အခုလိုကိုယ့်ရခဲ့တဲ့ ဗဟုသုတ ကိုပြန်ဝေ ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူး များရီးတင်ပါတယ်..:D moon
February 5, 2009 @ 5:18 pm Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI